Tena Misy ve ny Devoly? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frafra Frantsay Féroïen Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabuverdianu Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kekchi Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwanyama Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Maya Mingrelian Mooré Myama Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Turkmène Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa tzeltal Éwé
Eny. Tena misy ny Devoly. Izy no “mpitondra an’izao tontolo izao.” Anjely tsara izy fa lasa ratsy sy nikomy tamin’Andriamanitra. (Jaona 14:30; Efesianina 6:11, 12) Mampiseho ny toetrany ireto anarana sy teny iantsoana azy ireto:
Satana, izay midika hoe “Mpanohitra.”—Joba 1:6.
Devoly, izay midika hoe “Mpanendrikendrika.”—Apokalypsy 12:9.
Menarana, izay ilazan’ny Baiboly ny hoe “Mpamitaka.”—2 Korintianina 11:3.
Mpaka fanahy.—Matio 4:3.
Tsy ny faharatsiana fotsiny ny Devoly
Misy mino hoe ny faharatsiana ao amin’ny tsirairay i Satana Devoly. Ny Baiboly anefa milaza fa nifampiresaka izy sy Andriamanitra. Andriamanitra ve dia hifampiresaka amin’ny faharatsiana ao aminy, nefa izy aza lavorary? (Deoteronomia 32:4; Joba 2:1-6) Toy izany koa fa tsy nisy ota i Jesosy, nefa lazain’ny Baiboly fa naka fanahy azy ny Devoly. (Matio 4:8-10; 1 Jaona 3:5) Midika izany hoe tena misy ny Devoly, fa tsy ny faharatsiana fotsiny.
Tsy mahagaga raha maro ny olona tsy mino hoe misy ny Devoly. Milaza mantsy ny Baiboly fa mamitaka ny olona izy mba hanatratrarana ny tanjony. (2 Tesalonianina 2:9, 10) Ataony toy ny jamba, ohatra, ny olona maro ka lasa tsy mino hoe misy izy.—2 Korintianina 4:4.
Hevi-diso hafa momba ny Devoly
Hevi-diso: Antsoina koa hoe Losifera ny Devoly.
Ny tena marina: Midika hoe “ilay mamirapiratra” ny teny hebreo nadikan’ny Baiboly sasany hoe “Losifera.” (Isaia 14:12) Asehon’ny teny manodidina fa ny tarana-mpanjaka babylonianina no tiana horesahina eo amin’ilay andininy, ary naetrin’Andriamanitra izy ireo satria nirehareha. (Isaia 14:4, 13-20) Natao hanesoana azy ireo tamin’izy ireo resy ilay teny hoe “ilay mamirapiratra.”
Hevi-diso: Miasa ho an’Andriamanitra ny Devoly, ka manampy azy hitsara ny olona.
Ny tena marina: Fahavalon’Andriamanitra i Satana Devoly fa tsy mpanompony. Manohitra sy miampanga an’ireo olona manompo an’Andriamanitra izy.—1 Petera 5:8; Apokalypsy 12:10.
Misy zavatra efatra omen’Andriamanitra mba hiarovana anao amin’i Satana.
Hizara Hizara Tena Misy ve ny Devoly?
ijwbq no. 46
Hoatran’ny Ahoana ny Paozin’ny Devoly?